ကာယဗလအတွက် HGH, လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းများကကြွက်သားကြီးထွား
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2019
1. ကာယဗလအတွက် HGH, ကြွက်သားကြီးထွား
3. အဘယ်ကြောင့်ငါလေ့ကျင့်ခန်းပြုလျက်, ကြွက်သားကြီးထွားကြသည်မဟုတ်လော
4. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာနှင့် HGH ၏သင်တန်းကာလအတွင်းထိန်းချုပ်မှု၏အရေးပါမှု
5. အဆိုပါ HGH сourseများအတွက်အမြင့်ပရိုတိန်းအစားအသောက်၏အရေးပါမှု
6. HGH ထိုးနှင့်အတူအိပ်စက်ခြင်း၏အရေးပါမှု
9. HGH - 200-300 အားဖြင့်သင့်ရလဒ်၏ accelerator%
10 ။ ဘယ်လိုကြွက်သား HGH နှင့်အတူကြီးထွားသနည်း?
11 ။ စိတျနှလုံးအဘို့အ Cardio: ပြင်အလှတရား - အထဲမှာကျန်းမာရေး
ကာယဗလအတွက် HGH, ကြွက်သားကြီးထွား
ခွန်အားကိုခံနိုင်ရည်စုံလင်ကြွက်သားကယ်ဆယ်ရေးတိုင်းကာယဗလမယ်အောင်မြင်ရန်ဟူ.သာသောသုံးခုအဓိကရလာဒ်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပွငျအချိုးအစား၏ပြင်ပစံနမူနာကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌ထား: ကဒီအားကစားတစ်နည်း "ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်ကျေးမှု" အတွက်, ဒုတိယအမည် "ကာယဗလ" ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာအဓိကအရာကိန်းဂဏန်းလက်ခံစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ, သူ့ကြွက်သားများမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်, ယင်းအားကစားသမားထွက်ဆှဲဘယ်လောက်အလေးချိန်အလွန်အရေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကာယဗလများအတွက်တောင်မှနာကျင်မှုမှတဆင့်မာနဲ့ Hard လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။
ပန်းတိုင်အရှိန်မြှင့်ရန်, အတွေ့အကြုံရှိကာယဗလဖို့အကြံပြု Genotropin ဝယ်ဖို့ - လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး။
နီးပါး 140 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာကာယဗလအများဆုံးဖြစ်နိုင်သောကသူ့စိတ်ကူးနှင့်အတူအပေါင်းတို့နှင့်ကြွက်သားအုပ်စုများတစ်ချိန်တည်းယူနီဖောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးမှာဟစျကျွောကွ။ တစ်ဦးချင်းစီယလေ့ကျင့်ခန်းများထို့ကြောင့်အဓိကတာဝန် - ကြွက်သားထုထည်ကိုတည်ဆောက်။ ဤအမှုအလုံးစုံ၏အကောင်းဆုံးအစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးဖို့ကူညီသည်။ ကာယဗလအတွက်သူတို့ထဲကငါးအခြေခံ polyarticulaire ဟုခေါ်ကြသည်။
ဤခါးပတ်နှင့်ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်းရပ်တည်မှုမှကီထိုင်, deadlift, ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်း, လှံတံကိုဆွဲပါဝင်သည်။ ဤအ element တွေကိုတစ်ခုချင်းစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်: ခြေထောက်၏ musculature ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အနေဖြင့်ဝမ်းဗိုက်၏အားကောင်းရန်။ အပြည့်အဝရှုပ်ထွေးခြုံငုံရလဒ်ရည်ရွယ်သည်။ ကာယဗလသင်တန်းဆရာအစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း၏4အဓိကအားသာချက်ခွဲခြား:
- အဆီလည်းမီးလောင်နေချိန်တွင်ကြွက်သားကြီးထွား။ ထိုအလေ့ကျင့်ခန်းစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်အာဟာရဓာတ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုစားသုံး။ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စတော့ရှယ်ယာ - glycogen ။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်း၏အဆုံးမှာရုပ်ပျိုဖြစ်စဉ်များအဆီရှို့ကြောင်းစတင်နေကြသည်။
- ဇီဝြဖစ်၏ Acceleration ။ ကယ်လိုရီတစ်ဦးအပိုဆောင်းစားသုံးခြင်းမရှိဘဲအဘယ်သူမျှမကြီးထွားရှိလိမ့်မည်: ကြွက်သားထုထည်ကိုတည်ဆောက်ဘို့ကိုလည်းအလွန်အရေးကြီးသောအရာတခုရလဒ်, အစာစားချင်စိတ်ကိုတိုးသကဲ့သို့။ ဒါကကိုယ်အလေးချိန်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ရရှိသူကိုပါးလွှာအားကစားသမားများအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။
- အပေါငျးတို့သအဓိကကြွက်သားအုပ်စုများတစ်ကြိမ်မှာလေ့လာပါ။ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအရ, ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တက်ကြွစွာအလှည့်၌, ကြွက်သားထုထည်တစ်ခုတိုးဖို့အထောက်အကူပေးသော, Testosterone နဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးသောဤအခွအေနေအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
- ထိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောစနစ်များ Activation ။ ဒါဟာသိသိသာသာလည်းနောက်ဆုံးမှာကြွက်သားကြီးထွားအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့သောဟော်မုန်းအဆင့်ကို, တိုးပွားစေပါသည်။
နိဂုံးသိသာသည်: အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းလေးနက်, ပြည့်စုံသောချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ သင်ရုံသင့်ရဲ့ရင်ဘတ်သို့မဟုတ် biceps လွှဲလျှင်, သင်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ဤမေးခွန်းကိုမကြာခဏအရင်ကဆိုရင်မေးဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှကျွန်တော်တစ်ဦးမှသင်တန်းဆရာများ၏လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကာယဗလကျွမ်းကျင်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။
ဒါကြောင့်မကြာခဏတစ်ဦးအပိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖန်တီးသောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်မလိုအပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းပါဝင်သည်။ ရေရှည်လေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်စွမ်းအင်စုဆောင်းရန်မကျွမ်းကျင်မှုနေဆဲလည်းမရှိကတည်းကနှင့်အညီ, အဓိကအရာရိုးရှင်းစွာအလုံအလောက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိမဟုတ်ပါဘူး။
ဒုတိယအချက်မှာအရင်ကဆိုရင်မကြာခဏအစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း၏ technique ကိုချိုးဖောက်။ ရလဒ်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်းတစ်ဦးမလုံလောက်သောဝန်နေသူများကဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခံရဖို့လိုအပ်သောကြွက်သားထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ ခဲ Self-လေ့လာမှုမှာမည်သူမဆိုအထပ်ထပ်၏အကောင်းဆုံးနံပါတ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ထားခြင်းအပြင်, - သူတို့ထဲက 5-7 ရှိသင့်ပါတယ်။ ဤငွေပမာဏကြွက်သားထုထည်၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်းပေးပါသည်။
အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းများ၏မှန်ကန်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုကျွမ်းကျင်ခဲ့သူ Beginner ကာယဗလမယ်, ပထမဦးဆုံးလများတွင် 5-7 ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုးမြှင့်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာနှင့် HGH ၏သင်တန်းကာလအတွင်းထိန်းချုပ်မှု၏အရေးပါမှု
လေ့ကျင့်ရေးရလဒျမြားကိုမပေးပါဘူး, နှင့်စွမ်းအင်ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တွေးမိဖို့မနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှုနျးမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ ကိုကျော်ကြား၏အတွေ့အကြုံမှဖွင့်ကြစို့ ဂျက်ဖရီဘဝ, အဘယ်သူသည်ကာယဗလ၌သူ၏အောင်မြင်မှုများအကြီးအကျယ်ဆရာများ၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်တရားရှိဖို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
မြင်ယောင်ကြည့်ပါ: တိုင်း session တစ်ခုမှာ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဝန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သဘောကိုဤကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်၏ကန့်သတ်မှုကိုသွားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သင်ကိုယ်သင်နောင်တရနှင့် "ငါမနိုင်မှတဆင့်" အလုပ်မလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်စာရင်းဇယားယုံကြည်ပါကအများဆုံးမကြာခဏဖြစ်ပျက်: အစပြုသူအားကစားသမားများ၏အကြောင်းကို 60% ထက်ဝက်သာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်များ၏မျက်နှာကို ထောက်. - ဒါပေမယ့်ဆရာအပန်းဖြေဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဟုတ်ပါတယ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာသင်သည်ညှဉ်းဆဲဖို့လိုလားသူတစ်ဦးအာဏာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ ရုံဆန့်ကျင်ဘက်။ သူကအားကစားသမား mindlessly ခန္ဓာကိုယ်လောင်ကျွမ်းဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်အားနည်းနေအစက်အပြောက်ဆုံးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ A ကောင်းဆုံးဆရာသင်တို့အဘို့တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်နှင့်အစားအစာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဓိကအရာပင်ဤသည်၌သည်မဟုတ်, သင်တို့အဘို့အထိရောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်တိကျတဲ့အရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့နည်းပြများ၏စွမ်းရည်ကိုပါ။
အဆိုပါ HGH သင်တန်းတစ်ခုမြင့်မားသောပရိုတိန်းဓာတ်စာ၏အရေးပါမှု
glycogen စတိုးဆိုင်များလျှော့ချကြသောအခါပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်း, စဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ကြွက်သားတစ်ရှူး၏အခြေခံဖြစ်သောပရိုတိန်း, စွမ်းအင် replenish မှစတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဆဲလ်အတွက်၎င်း၏အရေအတွက်ကမှန်မှန်ပွနျလညျထူထောငျရမညျ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကမြင့်မားသောပရိုတိန်းအကြောင်းအရာနဲ့အထူးအစားအစာလိုက်နာရမည်: ယင်း၏ကာယဗလမယ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏အသီးအသီးကီလိုဂရမ်များအတွက်တစ်နေ့လျှင် 2-3 ဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်။
အကြောင်း, 100 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်နှင့်တကွ, အားကစားသမားပရိုတိန်း၏နေ့စဉ် 200-300 ဂရမ်ခံယူသင့်ပါတယ်နေသည်။ အဲဒါကိုရဖို့အဘယ်မှာရှိသနည်း
ကြက်ဥအနှစ်များ၏အန္တရာယ်နှင့်အကျိုးအမြတ်၏မေးခွန်းကိုအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေဆဲပင်။ အတော်များများကအားကစားသမားအရေးကြီးသောအဆီနှင့်ဗီတာမင်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ကတန်ဖိုးထား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖက်တီးအက်ဆစ်ဖြင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချ, ကြီးထွားဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုနှေးကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။
တချို့ကကျွမ်းကျင်သူများကပုံမှန်အစားအသောက်ကနေပရိုတိန်းဓာတ်များကြွက်သားတစ်သျှူးက restore ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြောင်းငြင်းခုန်။ သို့သျောလညျးမွငျ့မားဝန်မှာ whey ကနေဆင်းသက်လာပရိုတိန်းများ, အားကစားအာဟာရကိုထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကအားသာချက်စုပ်ယူ၏လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်းဖြစ်ပါသည်: သာမိနစ်အနည်းငယ်, အမဲသားကိုတစ်ခုထက် ပို. နာရီများအတွက်ကြေညက်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။
သီးခြားစီပါကအစားအစာများ၏ကယ်လိုရီ content တွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကဆိုပါတယ်ရပါမည်။ ကာယဗလသာထို့နောက်ကြွက်သားကြီးထွားထိရောက်သောလိမ့်မည်, တစ်နေ့လျှင် kcal 3000 အထိစုပ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်သင့်လျော်သောအစာအာဟာရနှင့်အတူကာယဗလအတွက်တိုးတက်မှု၏အခြေခံပြည့်စုံနာလန်ထူသည်။ ဒီမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍအနည်းဆုံး 8 နာရီမှာပေးထားရန်လိုအပ်ပါသည်သောညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းဖြင့်ကစားနေသည်။ ဝန်၏တိုးလာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောကြာချိန် 9-11 နာရီတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
အမှန်မှာအိပ်နေစဉ်, ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု HGH အပါအဝင် activated ဖြစ်ပါတယ်။ , သိသိသာသာခန္ဓာကိုယ်တိုး၎င်း၏အဆင့်အိပ်ပျော်ကျသွားအားဖြင့်ပိုင်းခြားဖက်တီးအက်ဆစ်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ဟိုဖြစ်စဉ်များလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး2နာရီအတွင်း။ 1-2 နာရီအကြောင်းကို - အကောင်းဆုံးကတော့, သငျသညျနေ့လည်အနားယူရန်လိုအပ်သည်။
ယခင်ညဥ့်အတှကျအိပျခဲ့အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပါကလေ့ကျင့်ရေးရွှေ့ဆိုင်းဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ဒါဟာသင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိဝေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်ကဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အသီးအပွဗီတာမင်၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်အစိုင်အခဲဂုဏ်သတင်းရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း, များစွာသောကာယဗလသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့မဟုတ်ကြိုက်တတ်တဲ့။ "ကြောက်လန့်" အချက် - fructose များ၏ content, အဆီသို့ကူးပြောင်းသော။
သို့သော်အသည်းထဲမှာ glycogen များ၏သိုက်အခါအားလျော်စွာသုံးစွဲဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့ခြင်းနှင့် replenishment မလိုအပ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, fructose လေ့ကျင့်ရေးမှာသူတို့ရဲ့လျှင်မြန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်, glycogen နှင့်ကြွက်သားများကိုပါလိမ့်မယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အားကစားသမားများအဘို့မိမိတို့အကြိုးကြေးဇူးမြားသခြောအတှကျအဖြစ်။ ကာယဗလအထူးသဖြင့် artichoke, ချိုမြိန်ငရုတ်ကောင်း, ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်အမျိုးမျိုးအကြံပြုကြသည်:
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ကိုက်လန်။ ထိုထုတ်ကုန်ဖြစ်သောကြောင့်ဗီတာမင်, ဖိုင်ဘာ, ကယ်လစီယမ်, မန်းဂနိစ်, ကြေးနီ၏မြင့်အကြောင်းအရာမသာရွေးချယ်တော်မူကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုခုနှစ်တွင်လက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချကူညီပေးသောဖက်တီးအက်ဆစ် Omega-3 နှင့် Omega-6, ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် polyunsaturated နိုင်ပါသည်။
အားကစားဆိုင်ရာစာအာဟာရပညာရှင်တွေတစ်ဦးချင်းစီပါ g ကအနည်းဆုံးနေ့စဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းလျာများ၏3စားသုံးခြင်းနှင့်2၏ 90 အသီးဟင်းလျာများစားရန်အကြံပြုသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရက်၏စုစုပေါင်းထိခိုက်သက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာသိကြပေမယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အန္တရာယ်အရက်ကာယဗလအဘို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုပြောပြရကျိုးနပ်မယ့်နေသည်။ ပူပြင်းတဲ့အချိုရည်တွင်ပါရှိသောအီသနော 25% အားဖြင့်ပရိုတင်းပေါင်းစပ်လျော့နည်းစေသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရက် 24% တို့က testosterone ဟော်မုန်းများ၏အဆင့်ကိုလျော့ကျစေပါတယ် - ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦး Steroid တစ်မျိုး။ ဒါကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို double ဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတျမှာပုံမှန်ရေစက်သွန်း - ပါဝါကိုညွှန်ကိန်းများတွင်သိသိသာသာကျဆင်း။ သငျသညျတိုးတက်မှုမှဖမ်းယူနားဆင်နေကြသည်ဆိုပါကထိုကွောငျ့,, ကမှာအားလုံးအရက်ငြင်းဆန် သာ. ကောင်း၏။
HGH - 200-300 အားဖြင့်သင့်ရလဒ်၏ accelerator%
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ HGH ကမ္ဘာတဝှမ်းကာယဗလတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဟိုမူးယစ်ဆေးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသဘာဝပရိုတိန်းပေါင်းစပ်မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်။ သငျသညျတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်a"ကိုယျခန်ဓာကိုယဉ်ကျေးမှု" အောင်မြင်ရန်ဖို့ကွိုးစားလျှင်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြေရှင်းချက်ရန်ဖြစ်ပါသည် HGH ဝယ်ဖို့ နှင့်အကြံပြုသောက်သုံးသောအညီယူပါ။
- ဟို steroids မတူဘဲကလှုံ့ဆော်သည်ဟုရှိပြီးသားကြွက်သားမျှင်များ၏ hypertrophy, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အရေအတွက်တိုးမဟုတ်ပါဘူး
- menisci, intervertebral disc တွေကိုအဖြစ် microtraumas ကနေရွတ်၏အရိုးနုကိုကာကွယ်ပေးသည်
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရိုး, အဆစ်နှင့်ကြွက်သားမှဒဏ်ရာအဘို့, ကြီးထွားဟော်မုန်းကုသမှုထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်: ထုတ်ကုန်ဆဲလ်ပြုပြင်နှင့်လျင်မြန်စွာအနာပျောက်စေသောအသေချာ
ဒါဟာမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်: လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကြွက်သားသင့်ရဲ့အားထုတ်မှုမရှိဘဲကြီးပွားလိမ့်မယ်ရာမှတစ်ဦးအံ့ဖွယ်ဆေးထိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင် 2-3 အဆအားဖြင့်ရလဒ်များ၏အောင်မြင်မှုအရှိန်မြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုရုံလက်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသာမူရင်းမူးယစ်ရန်မဟုတ်, ယင်း၏သံသယရှိ counterparts တွေကိုသက်ဆိုင်သည်။ ချင် တရားဝင်လူ့အရည်အသွေးမြင့်မားတိုးတကျမှုဟော်မုန်းကိုဝယ် - အဆက်အသွယ်ထုတ်လုပ်သူကသာတရားဝင်ဖြန့်ဖြူး။
HGH ထိုင်း ရှိသမျှသောလောကီနိုင်ငံများသို့ကုန်ပစ္စည်းကယ်တင်တတ်၏။ တူညီသောလမ်းအတွက်အွန်လိုင်းရောင်းရန် HGH အပေါငျးတို့သခွင့်လိုင်စင်နှင့်လက်မှတ်များရှိပါတယ်အဖြစ်ဘန်ကောက်မြို့သို့တိုက်ရိုက်ရောင်းချခဲ့သည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆိုမှဖြန့်ဝေ7ရက်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးကြာပါသည်။
ဘယ်လိုကြွက်သား HGH နှင့်အတူကြီးထွားသနည်း?
အာဏာနှင့်ဗို့အား - ဤဖြစ်စဉ်ကို2အချက်များလိုအပ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျဒုတိယလျော်သောလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူနေသူများကဖန်တီးတစ်ခုပရိုတိန်းဓာတ်စာအားဖြင့်အဆက်မပြတ်ပေးရမညျ။ အစွမ်းသတ္တိကိုစဉ်အတွင်း Micro-လပ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်ကြွက်သားအမျှင်များတွင်အများဆုံးဝန်နှင့်အတူလေ့ရှိသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံဆဲလ် receptors ပြန်လည်နာလန်ထူရန်လိုအပ်သည်ကြောင်းအချက်ပြပေးပါ။
ပရိုတိန်းဓာတ်၏ပေါင်းစပ်ခြင်း, ပျက်စီးဒေသများရှိ embedded ခံရဖို့ကိုစတင်ရာ၏မော်လီကျူးများစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကကြွက်သားင်း၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးမြှင့်, ပေါက်ပုံဖြစ်ပါသည်။ လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ရန်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလအစွမ်းသတ္တိ၏ကန့်သတ်မှာလေ့ကျင့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
စိတျနှလုံးအဘို့အ Cardio: ပြင်အလှတရား - အထဲမှာကျန်းမာရေး
အဘယ်သူမျှမ Self-လေးစားကာယဗလမယ်ရုံကြွက်သား၏တောင်ဖြစ်လာမှခွန်အားလေ့ကျင့်ရေးမှတစ်ခုတည်းကိုသာကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ကြွက်သားထုထည်တိုးမြှင့်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းရွရွပြေး, စက်ဘီးစီးခြင်း, ရေကူးနှင့်အခြားအေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများကဖြည့်ဆည်းရပါမည်ဒါကြောင့်ကာယဗလ, ကျန်းမာသောလူတစ်ဦးအားကစားဖြစ်ပါတယ်။